Indlela yokulinganisa iPrinta yakho ye-3D
NguRichard Horne, uKalani Kirk Hausman
Xa i-firmware yakho ye-3D yomshicileli isetiwe kwaye i-RepRap yentshukumo yoomatshini bokushicilela ubukhulu becala ilinganisiwe, ukulungiswa kokugqibela kokuprinta kwe-3D kubandakanya ezi nkqubo:
Ukwenza imilinganiselo yokugqibela ye-extruder kunye nesiphelo esishushu
Ukufaka ezi nkcukacha kwi-firmware
Ukuqulunqa nokukhuphela i-firmware kwakhona
Ukulinganisa ngokuchanekileyo i-extruder kunye nesiphelo esishushu kwenza wonke umahluko phakathi kokuprinta okujongeka kakubi kunye nokuhle okumangalisayo.
Iinkqubo ezilapha zisebenzisa iPronterface (jonga eli nani lilandelayo). Pronterface isetyenziselwa olu seto lokuqala kuba kulula ukuyisebenzisa. I-Pronterface yenzelwe kwaye yacwangciswa nguKliment Yanev njengonxibelelwano oluvulekileyo lomthombo wolwazi lweRepRap 3D printers. Fumana iphakheji epheleleyo (ebizwa ngokuba ukugqitha ).
Pronterface isebenza kwaye iqhagamshele kumshicileli weRepRap nge-G-khowudi elayishiwe kwaye ilungele ukuprinta.
amayeza ngelixa uncancisa
Ngokungafaniyo neeprinta zephepha ze-2D ezibonakala kuzo zonke izicelo njengabashicileli, uninzi lweeprinta ze3D zifuna inkqubo yokubamba ukulungiselela, ukulawula, nokuthumela ifayile ethile yekhowudi yeG. Ke, kweli nqanaba, ngekhe uvule umatshini kwaye ucinezele uPrinta. Kuya kufuneka wenze okungaphezulu kancinci ngeprinta ye-3D. Nanga amanyathelo owalandelayo kwiPronterface:
Qhagamshela umshicileli we-3D kwikhompyuter yakho ngentambo ye-USB kwaye uvule umshicileli.
Khetha izibuko lonxibelelwano kuluhlu.
Qinisekisa ukuba isantya esifanelekileyo sikhethiwe.
Kwi-firmware yaseMarlin, esi santya sihlala singama-250,000.
Ukuba izibuko lonxibelelwano kunye nesantya sisetiwe, ubona umyalezo wokungena kwiwindows esekunene kwiPronterface ebonisa uqhagamshelo nonxibelelwano luyasebenza. Lo myalezo ubonisa ukuba unolawulo lomshicileli kwaye ukulungele ukwamkela imiyalelo.
Ukulinganisa ibhedi yakho yokuprinta ye-3D
Umyalelo wokuqala weshishini uqinisekisa ukuba umlomo wakho oshushu ngumgama omiselweyo ukusuka kwindawo yokuprinta kwaye indawo yakho yokushicilela ithe tyaba kwaye inqanaba.
Inkqubo iyahluka ukusuka kwiprinta ye-3D iye kwenye. Ngokwesiqhelo, kubandakanya ukuqinisa okanye ukuthothisa amanqaku amathathu okanye amane ebhedini yakho yokwakha, edla ngokwenziwa ngezinto zePCB kwaye ilungiswe okanye ibanjwe ziibholiti zentwasahlobo ezikuvumela ukuba ulungelelanise ibhedi.
Ngaphambi kokuba ulinganise ibhedi, qiniseka ukuba ezinye iindibano ezinkulu zeprinta yakho ye-3D-ngakumbi ukuhambisa kwe-X kunye nokuhamba nkqo kwe-Z- zikwinqanaba kwaye zikumgama olinganayo kwicala ngalinye.
Isivamvo esiphambili esibeka isiphelo esishushu ngokuchanekileyo kude nebhedi yokwakha yile Isiphelo se-Z-axis . Ngokwesiqhelo, esi sivamvo siswitshisi somatshini esinokuhanjiswa sinyuswe sisezantsi okanye isivamvo semagneti esinokulungiswa kumgama osetiweyo ngokuguqula iqhina elincinci elijikelezayo elaziwa njenge potentiometer . Ngokwesiqhelo, i-LED encinci kwizibane zokumisa okokugqibela xa kufikwa kwindawo yokumisa. Ukuba i-axis yakho ayiyeki, okanye ukuba i-LED ayikhanyisi xa i-axis ithunyelwe kwindawo yasekhaya, unokuba nolungelelwaniso olungalunganga olusetiweyo kwi-firmware yakho. Kwimeko enjalo, tshintsha X_ENDSTOP_INVERTING = true useto lube false kwi configuration.h ifayile yeMarlin firmware.
Ukuba usebenzisa ibhedi efudumeleyo, qiniseka ukuba inikwe amandla kunye nobushushu obugcweleyo kwimizuzu embalwa (ukuvumela yonke into ukuba inyuke iye apho iya kuba khona xa ushicilela) ngaphambi kokuba usete umgama womatshini wombhobho oshushu osuka ebhedini .
Jonga ukusebenza kotshintsho lokuphela kokuyalela ngokuyalela i-axis nganye ekuhambeni ukuya kwindawo yasekhaya. (Eli nani lilandelayo libonisa ulawulo olufanelekileyo kwi-Pronterface.) Emva koko usete umgama we-Z-axis ukuze umlomo oshushu ubekwe ngokufanelekileyo kude nebhedi. Indlela efanelekileyo yokwenza oko kukuhambisa intloko yokuprinta kwiziko lokulala. Kumshicileli oQinisekayo oqhelekileyo, useta esi sithuba ngokuhambisa i-X nge-100mm kunye no-Y nge-100mm.
ipilisi engqukuva emthubi m 751
Ungasebenzisa ulawulo lwePronterface ukubeka intloko yokuprinta yokulinganisa ibhedi, ukuseta umgama ochanekileyo wombhobho wokuphela oshushu, kunye nokufudumeza ngaphambi kokuprinta.
Rhoqo, iprinta ye3D ikunceda ngale nkqubo ngokusebenzisa isikrini seLCD okanye ujongano lomsebenzisi. Kuya kufuneka ujikeleze ivili lokujija ukuze uhlengahlengise indawo yokulala. Emva koko inzwa ijonga ukulinganisa kwaye ikwazise ukuba kukho naluphi na uhlengahlengiso oluya kufuneka. Xa yonke into ikwinqanaba, ungaqhubeka ngokuprinta, usazi ukuba umaleko wokuqala kufuneka wehle ngokugudileyo nangokulinganayo.
Umgama ekufuneka uwufezekisile uxhomekeke kubungakanani bemilomo yemilomo kunye nendlela oyilungelelanise ngayo ibhedi yokwakha. Ngokwenxalenye yesi sizathu, ishidi leglasi (elihlala licabaleleke ngokufanelekileyo) lukhetho olufanelekileyo kwindawo yokwakha. Njengesiqalo, qiniseka ukuba ungatyibilika kwiphepha elinye leofisi phantsi kombhobho xa ukwisikhundla sasekhaya se-Z. Jonga lo msantsa ukufana kuzo zone iikona nakwiziko. Sebenzisa amaqhosha okuhamba kwe-Z kwi-Pronterface ukuphakamisa nokuthoba umlomo. Emva koko ungahambisa indawo yokuphela kwakho kwe-Z kwi-Z axis ukuze usebenze kumgama ochanekileyo ukusuka kwibhedi yokuprinta. (Sebenzisa iphepha le-ofisi njenge-spacer.) Xa ufika ekhaya i-axis ye-Z kwi-Pronterface ngokunqakraza kwiqhosha laseKhaya u-Z (jonga kuMzobo 15-18), umlomo kufuneka uphakamise emva koko uyekise ukuphela kwe-Z. Ukuba isithuba asichanekanga, susa ukuphela kwe-Z kancinci kwaye ucofe iqhosha laseKhaya kwakhona.
Ukutshintsha ulawulo lwakho lobushushu olushushu
Inqanaba elilandelayo lokuseta lilungelelanisa iimfuno zolawulo lobushushu kwisiphelo sakho esishushu. Kule nkqubo, ufaka umyalelo m303 kwikona esezantsi ekunene kwesikrini sePronterface kwaye ucofe u-Thumela (jonga umfanekiso olandelayo). Lo myalelo unomshicileli owenza imijikelo yokufudumeza nokupholisa; Ekupheleni kwale mijikelo, ikunika useto oludingayo lokungena kwi-firmware | | + _ | | DEFAULT_Kp, kunye DEFAULT_Ki kwi DEFAULT_Kd ifayile.
ihlala ixesha elingakanani imbiza emchameni
Umyalelo we-G-khowudi m303 uqhuba inkqubo ye-autotune ebala useto lolawulo olufanelekileyo lwe-firmware yakho.
Bhala phantsi amaxabiso aboniswe nge configuration.h, DEFAULT_Kp, kunye DEFAULT_Ki. Ungenisa la maxabiso kwi-firmware xa ugqibezela inqanaba lokugqibela lokulinganisa.
Okulandelayo, kufuneka ulinganise umgama we-extruder.
yintoni i-buprenorphine kunye ne-naloxone yefilimu engezantsi
Ngaba utywala buyazirhoxisa ii-antibiotics
omega 3 oyile krill
yongeza kwiscreen sasekhaya i-android